प्यान नम्बर नभएर प्रदेश–२ का ११ सांसदले तलब बुझ्न पाएनन् ! - समय-समाचार
प्यान नम्बर नभएर प्रदेश–२ का ११ सांसदले तलब बुझ्न पाएनन् !
Oct 9, 2020 तलब, प्यान नम्बर, प्रदेश २, सांसद
जनकपुरधान, असाेज २३ । प्यान नम्बर नभएका प्रदेश–२ का ११ जना प्रदेशसभा सदस्य तलब बुझ्नबाट बञ्चित भएका छन्।
तलब बुझ्नका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थापछि प्यान नम्बरको नभएका प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुका ६७ जना स्वकीय सचिवले तलब नपाएका हुन्। प्यान नम्बरको अभावमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले साउन महिनादेखि नै तबल बुझ्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवका अनुसार नियुक्ति, बैंक खाता र प्यान नम्बर बुझाउन नसकेका ६७ जना प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरु समेत तलब रोकिएको छ।
निमित्त सचिव यादवले प्रदेशसभा सदस्यहरुको तलब बुझ्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि डकुमेन्टहरु जम्मा गरिरहेको र प्रक्रिया पूरा गरेर चाँडै बाँकी रहेका सदस्यहरुको तलब उपलब्ध गराइने बताए।
वित्तिय अनुशासन कायम गर्नका लागि संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते वित्तिय शासन व्यवस्था लागु गरेपछि तलब बुझ्नका लागि व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको हो।
यता करिब ३ महिनादेखि बन्द रहेको प्रदेशसभा बैठक असोज २५ गते बस्ने भएको छ। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर सबै व्यवस्था मिलाएर असोज २५ गतेका लागि बैठक डाकिएको निमित्त सचिव यादवले बताए।